“ဂျပန်ဘုရားသွား ငရဲလား” တခါသွားပြီး ကုသိုလ်မရပဲ ငရဲရခဲ့သူ တဦး – White Sone
“ဂျပန်ဘုရားသွား ငရဲလား” တခါသွားပြီး ကုသိုလ်မရပဲ ငရဲရခဲ့သူ တဦး
ဘာအထောက်အထားရှိလဲ။ ရှိတယ်။ ဘယ်သူလဲ။ ဦးလူအောင်လေ။
(၁) မနက်စောကတော့ အတော်အဆင်ပြေတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း အိပ်ရာထ ဘုရားပန်း ဆွမ်းနဲ့ သောက်တော်ရေချမ်း ကပ်တယ်။ ငါးပါးသီလ ယူတယ်။ နှင်းလူစာအုပ် အမှတ်-၁ ထွက်ခြင်း အထိမ်းအမှတ် ဦးဇင်းငနုချောင်းသားရဲ့ ဓမ္မနဒီကျောင်း (ကြူးနှစ်စာပေကျောင်း) ကို ဆွမ်းဟင်းသွားကပ်ဖို့ မဒမ်လူအောင် ချက်ပြုတ်ရာမှာ ကူတယ်။ ပဲသီးကို ခပ်စောင်းစောင်းလေး မလှီးတတ်တာကလွဲရင် ကျန်တာ အေးအေးဆေးဆေးရယ်။ မှော်ဘီရောက်၊ ဆွမ်းကပ်၊ ဦးကြူး ဦးငနုတို့နဲ့ စကားနည်းနည်းပြော၊ ဆွမ်းကျန်ကွမ်းကျန်စားပြီး ပြန်လာကြတယ်။ ဒီအထိလည်း ဟုတ်နေတုန်းပဲ။
(၂) တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးဘူး၊ လမ်းကြုံနေတာပဲ၊ ဂျပန်ဘုရား ဝင်ဖူးကြစို့။ လင်မယားနှစ်ယောက် အဲ့ဒီလိုအကြံပေါက်တာက စတယ် ပြောပါတော့။
(၃) ဇွန်လရဲ့မိုးရေစက်များ တသည်းသည်း။ ရုံးပိတ်ရက်လည်း ဖြစ်လို့ထင်ရဲ့ စောင့်ဆိုင်းလူတန်းက တမျှော်တခေါ်။ အပေါ်က အမိုးစိမ်းယာယီစောင်းတန်း စင်္ကြံလမ်းလေးကြောင့် ခေါင်းလုံပေမဲ့ အောက်ကြွေပြားက တလျှောက်လုံးစို ဗွက်ပေါက်။ တစ်ခါခေါ် သုံးရာ့ငါးဆယ်နှုန်းနဲ့ကို ခြေတောင့်အောင် စောင့်ရတယ်။ ပျောက်ခါစ ချောင်းခြောက်လေးက ဖိနပ်မပါတဲ့ အအေးဓာတ်ကြောင့် တစ်ကျော့ပြန် ဟွတ်ချင်လာပြီ။ (သက်ကြီးပိုင်း ဂိလာနဆို ကွိုင်ပြီ) ဒါတောင် ကိုယ်က စောရောက်ပြီး ဝင်နေဆဲတစ်သုတ်အပြီးကိုပဲ စောင့်ကံကြုံလို့။ နှစ်ကျော့ သုံးကျော့ တေးကိုများသီရရင်တော့..
(၄) ရောက်ဖူးသမျှ ဘယ်ဘုရားနဲ့မှမတူ အသုတ်လိုက်သွင်းနေတာမို့၊ ဝင်သွားကြချိန်ကလည်း နာရီဝက်ကျော်မို့ အတွင်းထဲမှာ ရှေးဟောင်းဘုရားတွေအကြောင်းများ စနစ်တကျ လုံးစေ့ပတ်စေ့ ရှင်းပြနေလေသလား..
(၅) ဆိုင်ကယ်ပေါ် နှစ်ယောက်ကြား ဆွမ်းချိုင့်ခြင်းချပြီး ခွစီးရတာမို့ မဒမ်လူက ဘောင်းဘီလက်ရှည်နဲ့။ အတိုနဲ့သာ မသင့်တော်တာ၊ အရှည်က ရပါတယ်လို့ မိန်းမကို ပြောလာတာ အဟောသိကံ။ ဝင်ခွင့်မရဘူး၊ ဟိုအနားမှာ ထဘီရောင်းတယ်၊ တစ်ထည် ၁၅၀၀ တဲ့။ ဝယ်ပေါ့.. ယောဂီရောင် အပါးအစလေး ဘောင်းဘီပေါ်ကထပ်ပတ် (ကွင်းမဟုတ်လို့ ထပ်ပဲပတ်ရမယ်)။
(၆) အတွင်းထဲ ရောက်၊ လူသုံးရာကျော် နေရာချမပြီးသေးမီ ၁. အလှူခံခွက် မျက်နှာရှေ့ထိုးလာတယ်, ၂. ဘုရားဆိုင်ရာစီဒီချပ် တစ်ချပ် တစ်ထောင်နဲ့ လိုက်ရောင်းတယ်, ၃. သိန်းလေးသောင်းကျော်မယ်ဆိုတဲ့ ဆောက်လက်စ ငါးထပ်ဗိမာန်ကြီးထဲ ဌာပနာကုသိုလ်ယူနိုင်ပါသည်ဆိုပြီး ဘုရားလက်တစ်သစ် တစ်ဆူကို ၅ ထောင်နဲ့ ရောင်းတယ်, ၄. ဆရာတော်ကြီးအဆောင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ဘုရားပုံတော်တွေ ရောင်းတယ်။ ပုံသေး ၁ထောင်၊ ပုံကြီး ၂ထောင် (သူပြောပြတဲ့ အစွမ်းကတော့ အံ့မခန်းပဲ တစ်သက်လုံး အလုပ်မလုပ်ဘဲရမယ်), ၅. သံဃာစစ်သံဃာမှန်နဲ့တွေ့နေတဲ့ အလွန်အင်မတန်ကြုံကြိုက်ခဲအချိန်မှာ ကပ်လှူသွားကြပါဆိုပြီး သင်္ကန်းတစ်စုံ ၂ သောင်း ရောင်းတယ်။ ပြောသေးတယ် အပြင်မှာ အလှူခံပုံးမထားပါဘူးခင်ဗျတဲ့ သာဓုဗျာပေါ့။
(၇) ဒီလောက်လူအုပ်ကြားထဲ ထထွက်သွားဖို့ မစဉ်းစားနဲ့နော်။ ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်လည်း မရှိဘူး လော်တပ်အော်နေတာ မကြားဘူးလား ဓာတ်ပုံမရိုက်နဲ့ ငရဲကြီးတယ် တဲ့။ အပေါ်ထပ် ရှေးဟောင်းဘုရားတွေကြားမှာ ဘုရားကိုယ်တော် ဖလက်ရှ်အလင်းကြောင့် တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်မှာစိုးလို့ဆို နားလည်တယ်။ ခု အောက်ထပ်မှာတော့ ဘုရားလည်း သိပ်ရှိတာ မဟုတ်ဘူး။ ဘာလို့ ဓာတ်ပုံ မရိုက်ရတာပါလိမ့်။ ငရဲကြီးတယ်ဆိုတော့ အသာကုပ်နေရုံပေါ့လေ။
(၈) ယောဂီရောင်တွေ ဝတ်ထားတဲ့ အာပေါင်အာရင်းသန်သန် ကြော်ငြာအားကောင်းကောင်း နိဗ္ဗာန်ဆော် လူရည်သန့် ဥပါသကာ ဥပါသိကာမကြီးများ အပြိုင်အဆိုင် မရအရ ချိုင်နေတာ ထားတော့။ ဆရာတော်ကလည်း မိန့်မိန့်ထိုင်ပြီး လာသမျှလူကုန် ငါးပါးသီလပေး၊ သင်္ကန်းကပ်ခံ။ (ကိုယ်က အိမ်ကသီလယူခဲ့ပြီးသား၊ သီလယူလာတာမဟုတ်ဘူး၊ ဘုရားဖူးလာတာ၊ ရှေးဟောင်းစိတ်ဝင်စားလို့လာတာ) (လော်ဒကာရဲ့ သံဃာစစ်သံဃာမှန်ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို တားမြစ်ရမယ်၊ တခြားသံဃာကို ထိခိုက်တယ်။ အဲ့ဝါကျကြောင့် ရလာတဲ့ သင်္ကန်းကိုလည်း အကပ်ခံဖို့ရှက်ရမယ်)
(၉) နာရီဝက်ကျော် ကြာတဲ့အထိ ရှေးဟောင်းဘုရား မမြင်ရသေးဘူးနော် ပရိသတ်ကြီး.. စောနကပြောတဲ့ အေးဓားပြကိစ္စ အကုန်ပြီးရင် နှစ်ယောက်တစ်တွဲ အပေါ်ထပ် ဘုရားဟောင်းများ စုဆောင်းပြထားရာဆီ တက်လို့ရပါပြီ။
(၁၀) အပေါ်ထပ် တက်တက်ချင်း လှေကားထိပ်မှာ မြင်ရမှာက ရှေးဟောင်း သစ်သားလက်တော်ပြတ်ကြီး။ လက်တော်ပက်လက်ဆိုမှတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဗမာပီပီ သူ့ထက်ငါ နဝကမ္မဝတ္ထုငွေယားလေးများ ညှပ်ကြပြီလေ။ ကောင်းလင့်တေး.. ဟဲ့.. ဒကာ ရှေ့ဆက်လျှောက် နောက်လူတွေ ရှိသေးတယ်။
(၁၁) သုတ်သုတ်သုတ်သုတ်နဲ့ ဘုရားတွေကြား မပြေးရုံတမယ် လှည့်ပတ်လမ်းလျှောက်။ ဘီလူးပလ္လင်ဆိုတာ ဒါလား.. (ဟဲ့ ဒကာ ဆက်လျှောက်၊ တမား) ဒီမျက်နှာကျက ပုဂံခေတ်ထင်ပါ့.. (ဟဲ့ ဒကာ ဆက်လျှောက်၊ တမား) နဂါးရုံအဓိပ္ပါယ်က.. (ဟဲ့ ဒကာ ဆက်လျှောက်၊ တမား) ဘာမှမသိလိုက်ဘဲ တစ်နေရာရောက်တော့..
(၁၂) တကယ့်ပဓာနဆန္ဒ ရှေးဟောင်းဘုရားတွေ ဖူးတွေ့ချိန်က ဆယ်မိနစ်မပြည့်ဘူး။ နောက်လူရှိသေးတယ် ဆင်းပေရော့ ဒကာတော်။ တမားပါဖ်..
(၁၃) အပြင်ပြန်ရောက်ပြီ။ အဆောင်လိုလို လက်ဖွဲ့လိုလို ဆိုင်တွေနောက် ဘုန်းကြီးထိုင်နေတာ တွေ့ရ။ ဟော.. ဟိုမှာ မြက်ဖြတ်စက်နဲ့ မြက်ခင်းအလှ ပြင်နေတာလည်း ဘုန်းတော်ကြီးပါပဲလား.. အံ့ဖွယ် (ဘူတဂါမပါတဗျတာယ ပါစိတ္တိယံ)
(၁၄) စုဆောင်းသူ ဂျပန်လူမျိုးကြီးတစ်ဦးက လှူခဲ့တယ်တဲ့။ အလိုနည်းပါပေ့။ ထိန်းသိမ်းထားသူလည်း မြန်မာမှု မြန်မာ့ရိုးရာ မြန်မာ့သမိုင်းအတွက် ကျေးဇူးများပါပေ့။ ရှေးဟောင်းဘုရားတစ်ဆူ နိုင်ငံခြားခိုးရောင်းရင် အလွန်ဆုံးရ သိန်း ၁ ရာပေါ့။ ခုများ လာထား သိန်း ၁ ထောင်၊ သိန်း ၁ သောင်း၊ ဟွင်း.. ဟွင်းး..
(နိဂုံး) ကဲ.. မပြောဘူးလား တကယ်ငရဲလားပါတယ်ဆို။ ဦးလူအောင်ဆို တစ်ခေါက်သွား တစ်ခါလားပဲ နောင်များလည်း သွားချင်ပေါင်။